စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အသုံးစွဲမှုအခြေအနေ | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
quo Vadis နည်းပြ? 2019
ဒီဆိုက်ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤကိုဖတ်ပြီဆိုလို သုံးစွဲမှုစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ သငျတို့သအသုံးပြုမှုဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများအစွမ်းသော။ သငျသညျကိုအသုံးပြုခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခွအေနမြေား၏အသီးအသီးကိုလိုကျနာဖို့သဘောတူမထားဘူးဆိုရင်, ဒီဆိုက်ကိုမသုံးကြဘူး။
နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်း (နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများ) မည်သည့်အချိန်တွင်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကို update လုပ်ဖို့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အဆိုပါပိတ်ပင်က်ဘ်ဆိုက်၏သင့်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းကိုသငျသညျသူတို့အားအပြောင်းအလဲများကိုလက်ခံသောဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။
ဤဆိုဒ်သည်အဖွဲ့အစည်းတွင်အသင်း ၀ င်ခြင်းကိုပေးသည်။ ဤဆိုဒ်သည် IAC နည်းပြမာစတာနည်းပြ (MMC) နှင့်နည်းပြအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကမ်းလှမ်းသည့်အဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်သော Certified Masteries နည်းပြများအနေဖြင့် IAC Coaching Masteries အပေါ် အခြေခံ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနည်းပြများအတွက်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းများပေးသည်။ (ဤနေရာတွင် စုပေါင်း၍“ IAC Coaching Masteries” ဟုရည်ညွှန်းသည်)
ဤသည်ဆိုက်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်သင်တန်းများပေးမထားဘူး။ စာသား, ဂရပ်ဖစ်, ပုံများ, လိုင်စင်ခွင့်ပြုရာမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်ပိတ်ပင်ဆိုက်ပေါ်တွင်ပါရှိသောအခြားပစ္စည်းအပါအဝင်ပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုများ၏ content သာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဆိုက်ကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအကွံဉာဏျ, ဒါမှမဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပြသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးများအတွက်အစားထိုးဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ အမြဲတမ်းသင်၏ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကို, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့တိကျတဲ့အခွအေနေနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့ကြပေမည်မေးခွန်းများနှင့်အတူအခြားအအရည်အချင်းပြည့်မီကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူရှာကြာလော့။
ဤသည်ဆိုက်ကိုပိတ်ပင်အဖွဲ့ဝင်များ၎င်းတို့၏စီးပွားဖြစ်လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များသို့ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®ထည့်သွင်းစေခြင်းငှါမထွက်ရတစ်ဦးလိုင်စင် program ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလိုင်စင်ပိတ်ပင်နဲ့သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များမှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှု. ပိတ်ပင်တစ်ခုတည်းကိုသာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, ရယူထားရတာအသုံးပြုမှုအတွက်အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုအစည်းအဝေးများ၏တစ်ခုတည်းမိတ္တူရှုမြင်သို့မဟုတ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်သင့်အားခွင့်။
အဆိုပါဆိုက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်နိုင်ငံခြားဥပဒေများအောက်တွင်မူပိုင်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဆိုက်ဖို့ခေါင်းစဉ်ပိတ်ပင်နဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ ဖော်ပြဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုခွင့်ပြုမဆိုက်ကိုမဆိုသုံးစွဲခြင်းအခြေအနေများဤဝေါဟာရများကိုတစ်ဖောက်ဖျက်သည်နှင့်မူပိုင်ခွင့်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားဥပဒေများချိုးဖောက်စေနိုင်သည်။ ဆိုက်နှင့်၎င်း၏ features တွေပိတ်ပင်၏အယ်ဒီတာ့အာဘော်သမ္မာသတိပြောင်းလဲသို့မဟုတ်အသိပေးစာမပါဘဲအဆုံးသတ်ခြင်းမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့သည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုချိုးဖောက်လျှင်, ဆိုက်ကိုအသုံးပြုရန်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုအလိုအလျောက်အဆုံးသတ်။
ဤသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, အသုံးပြုဖို့ပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ မဆိုသက်ဆိုင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အခကြေးငွေသင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုနှင့်ဆိုက်ကိုအပေါငျးတို့သညျအခွားဝေါဟာရများနှင့်သင်၏လိုက်နာမှုမှဘာသာရပ်, နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအသင်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ non-သီးသန့် Non-လွှဲပြောင်း non-sublicensable, ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လိုင်စင်ပေးအပ်လျက်, ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ကိုသုံးပါ သာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး non-စီးပွားဖြစ်, ပုဂ္ဂလိကအသုံးပြုမှုများအတွက်, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လျှောက်ထားရန်။
ပစ္စည်းများ၏မျိုးပွားအဘယ်သူမျှမ. ဆိုက်ပေါ်တွင်ပစ္စည်းများကိုပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေအောက်တွင်ကာကွယ်ထားပါသည်။ ဆိုက်ပေါ်တွင်ပစ္စည်းကိုရယူသုံးခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်မည်သည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ပစ္စည်းမှအခွင့်အရေးများရရှိရန်ကြဘူး, မငျသညျထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းမဆိုလက်ရာများကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ ဆိုက်၏အကြောင်းအရာအားလုံးသည်အခွင့်အရေး, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ပစ္စည်းတို့ကိုအလိုအလျောက် hereunder ငါတို့အားဖြင့်ခွင့်ပြုခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်လိုင်စင်ရပ်ဆိုင်း။ မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရာဇဝတ်မှုနှင့်လူထုအခြေပြုပြစ်ဒဏ်များမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, သတင်းအချက်အလက်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအများ၏ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထက်ကျော်လွန်သောအလတ်စားကျော်ကူးစက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအဘို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်ယူမှုယူဆပါသို့မဟုတ်ပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်စပ်. မှတဆင့်ကူးစက်သောမဆိုဒေတာသို့မဟုတ်အခြားသောအချက်အလက်များ၏နှောင့်နှေး, ကျရှုံးခြင်း, ပြတ်တောက်သို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။
အဆိုပါပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုနှင့်ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery အနေနဲ့အခြေခံ "ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်" ပေါ်တွင်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ပိတ်ပင်နှင့်၎င်း၏လိုင်စင်ရ, ဥပဒေကခွင့်ပြုသောညျ့အဝအတိုင်းအတာအထိအမြန်သို့မဟုတ်ဆိုလို, ပြဌာန်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဖြစ်စေ, အားလုံးအာမခံ Disclaimer တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ကုန်သည်များ, တတိယပါတီ Non-ချိုးဖောက်မှုအခွင့်အရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး၏အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံဖို့ကန့်သတ်အပါအဝင်သော်လည်းမ ။ အထူးပိတ်ပင်အောက်ပါအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမကိုယ်စားသို့မဟုတ်အာမခံစေသည်:
ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မှတဆင့်ပေးသည့်ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ၏တိကျမှန်ကန်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရ, ပြည့်စုံ, Current သို့မဟုတ်အချိန်မီသည်ပစ္စည်းများ, စာသား, ဂရပ်ဖစ်, link သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေး။
သင်တစ်ဦးနည်းပြအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်လာရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်ရောက်ရှိရန်ကူညီပေးခြင်းအတွက်ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ၏ထိရောက်မှု။
အဘယ်သူမျှမဖြစ်ရပ်မှာတော့ပိတ်ပင်, ၎င်း၏လိုင်စင်ရသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုအပေါ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့န့်အသတ်, ဖွစျပှားနှင့်လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာ / အမှားများသေခြင်း, အမြတ်အစွန်းကိုဆုံးရှုံး, ဒါမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးသွားဒေတာသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းကနေရရှိလာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမပါဘဲအပါအဝင် (မည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ရကြလိမ့်မည် ပြတ်တောက်) အာမခံ, စာချုပ်, တရားမျှတမှုမရှိခြင်းသို့မဟုတ်အခြားဥပဒေရေးရာသီအိုရီပေါ်တွင်အခြေခံသည်ဖြစ်စေ, ဆိုက်ဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery သုံးစွဲဖို့အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကနေရရှိလာတဲ့နှင့်ပိတ်ပင်ထိုကဲ့သို့သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ၏အကြံပြုသည်ကိုဖြစ်စေမ။ ပိတ်ပင်ဆိုက်၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သေခြင်း, သို့မဟုတ်ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery အပါအဝင်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒဏ်ရာများအတွက်ထိုက်သည်မဟုတ်။ သင့်ရဲ့ဆိုက်အသုံးပြုမှုနှင့်ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery နှင့် ဆက်စပ်. ပေါ်ပေါက်မဆိုတောင်းဆိုမှုများထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်မှုမှမြင့်တက်ပေးခြင်းဖြစ်ရပ်၏နေ့စွဲ၏တစ်နှစ်အတွင်းယူဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဤအစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအောက်တွင်ကုစားသီးသန့်ဖြစ်ကြပြီးဖော်ပြသည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသူတို့အားန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ပိတ်ပင်ဤဥပဒေအထူးသနည်းပြအောင်လက်မှတ် pass သို့မဟုတ်ဝင်ငွေမှမဆိုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်ပျက်ကွက်မှုအတွက်မဆိုတာဝန်မယူပါ။ အောင်မြင်မှုမရှိအာမခံချက်ရှိပါသည်။ ပိတ်ပင်ဤဥပဒေအထူးတစ်ဦးလိုင်စင်အားလုံးတာဝန်မယူပါ။
မတရားသင်းသို့မဟုတ်တားမြစ်ထားသောအဘယ်သူမျှမအသုံးပြုမှု / Intellectual Property. သငျသညျကိုအသုံးပြုခြင်းဤဝေါဟာရများနှင့်အညီတင်းကြပ်စွာဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ non-သီးသန့်, Non-transferrable, ရုပ်သိမ်းခြင်းလိုင်စင်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ ဆိုက်ကိုသင်တို့၏အသုံးပြုမှုများ၏အခွအေနေသကဲ့သို့, သင်ဥပဒေမဲ့သို့မဟုတ်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်တားမြစ်ထားသောကြောင်းမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆိုက်ကိုမသုံးမညျဖွစျကွောငျးပိတ်ပင်ဖို့ခိုင်လုံ။ သင်, ပျက်စီးစေနိုင်သည့်တစုံတမျိုးအတွက်ဆိုက်ကိုကိုသုံးပါ disable, ဝနျထမျး, ဒါမှမဟုတ်ဆိုက်အယှက်သို့မဟုတ်ဆိုဒ်၏အခြားမည်သည့်ပါတီရဲ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်ခံစားနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျရရှိရန်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရရှိနိုင်ပါလုပ်ပါသို့မဟုတ်ဆိုဒ်မှတဆင့်ပေးမပေးဆိုနည်းလမ်းများမှတဆင့်မည်သည့်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ကြိုးစားမည်မဟုတ်ပါ။
အားလုံးအကြောင်းအရာထိုကဲ့သို့သောစာသား, ဂရပ်ဖစ်, အမှတ်တံဆိပ်များ, ပုံများ, အဖြစ်၎င်းစုစည်းသကဲ့သို့, ဆိုက်ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းလျက်, ဆိုက်ကိုပေါ်တွင်အသုံးပြုမဆိုဆော့ဖ်ဝဲ, နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဉာဏအားကာကွယ်ရန်အခြားဥပဒေများဖြင့်ကာကွယ်ထား ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်မူပိုင်ခွင့်များကစောင့်လိုက်နာရန်သဘောတူနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်သတိပေးချက်များ, ဒဏ္ဍာရီသို့မဟုတ်အခြားကန့်သတ်မဆိုဤကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာများတွင်ပါရှိသောနှင့်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများရမညျစေမည်မဟုတ်။
သင်, ပြုပြင်မွမ်းမံထုတ်ဝေရန်, transmit, ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာ, လွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, လက်ရာများဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်ဆိုက်တွင်တွေ့, မြေတပြင်လုံး၌ဖြစ်စေတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အကြောင်းအရာမဆိုအမြတ်ထုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပိတ်ပင်အကြောင်းအရာတွေကို Reseller ပေးတဲ့အတှကျမဟုတျပါဘူး။ ဆိုက်သင်၏အသုံးပြုမှုပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ၏သို့မဟုတ်မည်သည့်ကာကွယ်ထားအကြောင်းအရာမဆိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုမှုစေရန်သင့်အားခေါင်းစဉ်တပ်ဘူး, အထူးသဖြင့်သင်သည်မည်သည့်အကြောင်းအရာအတွက်မဆိုစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုသတိပေးချက်များ delete သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်မည်မဟုတ်။ သငျသညျတစ်ခုတည်းကိုသာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်ကာကွယ်ထားအကြောင်းအရာသုံးပါလိမ့်မယ်, နှင့်ပိတ်ပင်၏ express ကိုစာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်မပါဘဲအကြောင်းအရာမျှမကအခြားအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေမည်။ သင်မည်သည့်ကာကွယ်အကြောင်းအရာအတွက်မဆိုပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများဆည်းပူးမသဘောတူသည်။ ငါတို့ကဲ့သို့ဖော်ပြဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုနေဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ မှလွဲ. ပိတ်ပင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်စင်ရ၏မူပိုင်ရန်, အမြန်သို့မဟုတ်ဆိုလို, သင်သည်မည်သည့်လိုင်စင်ပေးသနားကြဘူး။ နည်းပြလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးကိုရရှိရန်အတွက်ပိတ်ပင်ဒါမှမဟုတ်ဆိုက်ကိုသို့မဟုတ်ယင်း၏အကြောင်းအရာမဆိုပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများနှင့်အတူတစ်ဦးလျှောက်ထားသူသို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တဦးမတတ်နိုင်ပါဘူး။
အထွေထွေကန့်သတ်. သငျသညျဤနေရာတွင်ခွင့်ပြုအဖြစ် မှလွဲ. အဆိုပါပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery, လွှဲပြောင်း copy သို့မဟုတ်ဖော်ပြရန်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျ, ငှားရမ်းခြင်းငှားရောင်းချဖြန့်ဖြူး, ထုတ်လွှင့်, sublicense သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုတတိယပါတီဖို့ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery မှမဆိုညာဘက် assign မည်မဟုတ်ပါ။ သင်, disable ရှောင်ကွင်း, ပြုပြင်ခြင်းရှုံးနိမ့်, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်မဆိုစီးပွားရေးအရသို့မဟုတ်တရားမဝင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆိုက်ကို၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်အသုံးပြုမဆိုဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အရေးများစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အကျော်လွှားဖို့ကြိုးစားမည်မဟုတ်ပါ။
အသုံးပြုသူပေးသွင်းချက်များကို. သင်မည်သည့်ပါတီမဆိုအခွင့်အရေးများအားထိပါးသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်ကြောင်းမည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာ upload သို့မဟုတ် transmit မည်မဟုတ်ကြောင်းသဘောတူသည်။ သင်သည်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောတင်သွင်းခဲ့တဲ့အားလုံးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Non-လျှို့ဝှက်ကြောင်းသဘောတူသည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောတင်သွင်းခဲ့တဲ့စေလျှင်, သင်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာ၏ပိုင်ရှင်ဖော်ပြနေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအ, သုံးစွဲမျိုးပွားမှလက်ရာများဖန်တီး, ပြုပြင်ခြင်းထုတ်ဝေရန်, ပြင်ဆင်ရန်တစ်မူပိုင်-အခမဲ့, အစဉ်မပြတ်, ဘယ်သို့, ကမ္ဘာ့ကျယ်ပြန့်သည် non-သီးသန့်ပိုင်ခွင့်ပေးသနားတော်မူကြောင်းကို warranting နေကြတယ် အဆိုပါဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမီဒီယာသို့မဟုတ်အလတ်စားအတွက်, သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံစံသို့မဟုတ် format ကိုယခုလူသိများသို့မဟုတ်နောကျမှတီထွင်လုပ်ဆောင်ပြ, ဖြန့်ဝေ, ဘာသာပြန်ဆို။
ပိတ်ပင်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေး. ဆိုက်ကိုလာရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်ပိတ်ပင်ဖို့အီးမေးလ်များကိုပေးပို့သည့်အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးရှိပါသည်။ သငျသညျအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကိုလက်ခံရရှိရန်သဘောတူနှင့်သင်အီးမေးလ်တစ်စောင်မှတဆင့်နှင့်ဆိုက်ကိုပေါ်မှာရှိသမျှသဘောတူညီချက်များ, သတိပေးချက်များ, ထုတ်ဖော်ကျနော်တို့အီလက်ထရောနစ်သင်တို့ဆီသို့များကိုအခြားဆက်သွယ်ရေး, ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးအရေးအသားအတွက်ဖြစ်ကြောင်းဥပဒေရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကျေနပ်ကြောင်းသဘောတူသည်။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုနှင့်အတူညီရန်ပျက်ကွက်, ကြမ်းတမ်းတရားမဝင်သို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်များနှင့်မဟုတ်ရင်နေသောဆက်သွယ်ရေး Remove;
လုံးဝသည်ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမဆိုချိုးဖောက်ပေါ်မှာဆိုက်ကိုမဆိုမှအသုံးပြုသူရဲ့ access ကိုရပ်စဲ;
မဆိုဆက်သွယ်ရေး Edit ကိုသို့မဟုတ် delete မသက်ဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောဆက်သွယ်ရေးအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများချိုးဖောက်ဖြစ်စေမ၏, ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ခဲ့သည်။
ပိတ်ပင်ကဧည့်သည်များများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးသို့မဟုတ်အများပြည်သူကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်သောယူဆမည်သည့်အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ပိတ်ပင်သည့်ပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုဒါမှမဟုတ်ဖျောပွလှုပ်ရှားမှုများစွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ် nonperformance ဘို့မဆိုလူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်း၏အသုံးပြုသူများအဘယ်သူမျှမတာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်တာဝန်ရှိပါတယ်။
Advertising ကြော်ငြာနှင့်အခြားအင်တာနက်စာမျက်နှာများမှ Links များ. ပိတ်ပင်မည်သည့်တတိယပါတီက်ဘ်ဆိုက်များ၏ content ထောက်ခံနေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပိတ်ပင်, link Third-party က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုတာဝန်မယူသည့်ပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုသို့မဟုတ် Third-party ကြော်ငြာများအတွင်းရှုမြင်သုံးသပ်ကြက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သူတို့၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကိုယ်စားပြုလုပ်မထားဘူး။ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသင်၏အသုံးပြုမှုကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ပင်သည့်ပိတ်ပင်ဆိုက်ပေါ်တွင်ကြော်ငြာမဆိုကုန်ပစ္စည်းထောက်ခံနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
လျော်ကြေး. သင့်ထံမှထွက်ပေါ်လာသောကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဥပဒေနှင့်စာရင်းကိုင်အခကြေးငွေ limitation မရှိဘဲအများအပါအဝင်ပိတ်ပင်၎င်း၏အရာရှိများ, ဒါရိုက်တာများ, ဝန်ထမ်းများ, အေးဂျင့်များ, လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်မည်သည့်တောင်းဆိုချက်များ, လုပ်ရပ်တွေကိုသို့မဟုတ်တောင်းဆိုချက်တွေ, liabilities နှင့်အခြေချနေထိုင်မှုမှသည်နှင့်ဆန့်ကျင်အန္တရာယ်ကင်းပေးသွင်း, ခုခံကာကွယ် indemnify နှင့်ကျင်းပရန်သဘောတူသို့မဟုတ်စွပ်စွဲ တစ်နည်းပြအဖြစ်အသုံးချခံရဖို့သငျသညျ၏ကျရှုံးခြင်းကနေသင့်ရဲ့နည်းပြအလေ့အကျင့်များပျက်ကွက်ရာမှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၏ကျရှုံးခြင်းကနေသင့်ရဲ့လက်မှတ်ရလဒ်ကနေဆိုက်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကနေရလဒ်။
ဤရွေ့ကားစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များဥပဒအခြေခံမူ၎င်း၏ပဋိပက္ခများမှလေးစားမှုမရှိဘဲ, နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်၏ဥပဒေများကအုပ်ချုပ်လျက်ရှိသည်။ ဤအစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမဆိုပြဌာန်းချက်အရည်အချင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်းဆိုတရားရုံးအနေဖြင့်ညျြးခံရဖို့ကိုတွေ့နေတယ်ဆိုရင်, ထိုကဲ့သို့သောပြဋ္ဌာန်းချက်များပါတရားမဝင်အပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု၌တည်နေရကြလိမ့်မည်သောဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၏ကျန်ရှိသောပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏တရားဝင်မှု, မထိခိုက်ရလိမ့်မည်။ ဤအစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များမဆို၏အဘယ်သူမျှမစွန့်လွှတ်ထိုကဲ့သို့သောသက်တမ်းသို့မဟုတ်ခွအေနအေသို့မဟုတ်အခြားဝေါဟာရကိုသို့မဟုတ်အခြေအနေတစ်ခုထပ်မံသို့မဟုတ်ဆက်လက်စွန့်လွှတ်မှတ်ယူရမည်။
အဆိုပါပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုအပေါ်တစ်ဦးအထူး "ဥပဒေရေးရာသတိပြုပါ" တွင်ပေးဖော်ပြအဖြစ် မှလွဲ. complete သဘောတူညီချက်,. ဤရွေ့ကားစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအဆိုပါပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုနှင့်ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ၏အသုံးပြုမှုကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူသင်နှင့်နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများအကြားကတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုသင်၏အသုံးပြုမှုကိုလည်းပိတ်ပင်အကြောင်းသတိပြုစရာများနှင့် herewith posted မူဝါဒများဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျနော်တို့သင်ပိတ်ပင်ဆိုက်ကိုပညာရေးနှင့်သိကောင်းစရာများကိုရှာဖွေမျှော်လင့်ပါတယ်။ နည်းပြ, LLC ၏ 2015 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး©။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။